Izicelo zokuxhasa amabhizinisi amaphakathi namancane ziyavalwa maduze - Bayede News
UMantashe uthi eyokungasebenzi kwabantu inkinga yomhlaba
Izicelo zizovulwa ngoLwesithathu mayelana nesikhwama sokusiza Ezohwebo Nezokutshalwa Kwezimali KwaZulu-Natal ukusiza amabhizinisi abethintekile ngenxa yezibhelu zangoNtulikazi kwephezulu. Izicelo zizovalwa ngoMfumfu zingama-25. Izigidi ezingama-R30 kuhloswe ngazo ukusiza amabhizinisi athintekile, amancane naphakathi nendawo ezindaweni ezisemadolobheni, emakhaya nasemalokishini. Inani lemixhaso lizoba phakathi kwezi-R50 000 nesigidi-R1.
USbonelo Mbatha, olahlekelwe ngamagaraji amathathu KwaMashu, eNanda naseBhamshela abiza izigidi ezingama-R40 uthi unethemba lokuthi ngeke kusaba khona okuyoba yizithikamezi ekufakweni kwesicelo soxhaso. UMbatha uthe, “Sithokozela lonke usizo uHulumeni alusondezayo ngakithi ikakhulukazi entsheni kanye nosomabhizinisi abasafufusa.
“Umuntu ubehlale engabaza kancane ngohlobo oluthile losizo olulethwe phambili. Isibonelo, uma umuntu efuna ukukunikeza usizo lwemali kodwa bese ekunika izithikamezi eziningi okungaba yimigomo nemibandela eminingi azungeze lokho asuke ekulekelela ngakho kuba yinkinga. Sidinga ukususa lezi zithikamezi ngoba uma abantu bephazamisekile ngale ndlela ngeke ubacele ukuthi babe sesimweni esihle sezezimali ngaphambi kokuba ubasize,” kunezela uMthiya.
Amafomu okufaka isicelo
Okhulumela Ezohwebo Nezokutshalwa Kwezimali KwaZulu-Natal uClaude Moodley uthi amafomu ezicelo azotholakala ophikweni lokuthuthukisa umnotho komasipala. UMoodley uthi babheke izinkampani ezazingenawo umshwalense.
Uthi, “Izinkampani ezinomshuwalense zithole izindlela ezingafaka izicelo zoxhaso ngakho-ke zizoya ezinkampanini zomshuwalense ezifanele okubandakanya iSASRIA futhi kulapho bengizobheka ukuvulwa kosizo ebelukukhokhela.”
“Lokhu kwenzelwe izinkampani ezingeyona ingxenye yalelo qembu kuphela. izinkampani ezingakwazanga ukukhokhela ukuthatha umshwalense kanti ikakhulukazi kunezinkampani eziye zathinteka ngenxa yezinxushunxushu zomphakathi futhi ezidinga ukungena ebhodini futhi lolu hlobo lokuxhaswa kuhloswe ngalo ukubabuyisela emnothweni osemthethweni,” uMoodley uyanezela.
Ezohwebo ngesikhathi sokhuvethe
ISouth African Special Risk Insurance Association (SASRIA) kuze kube manje isikhokhe imali engaphezu kwezigidigidi eziyisi-R6 yezimangalo kulandela udlame nokuphanga okwenzeke ngoNtulikazi KwaZulu-Natal naseGauteng. Ithi ithole izicelo ezibalelwa ezi-13 000 ezivela kumabhizinisi.
Bangaphezu kwama-300 abantu abashonile ngesikhathi kuhlaselwa izitolo, kuthengelwa ngomlilo izakhiwo ezihlukahlukene zamabhizinisi. Isifundazwe esakhahlamezeka kakhulu kwaba yiKwaZulu-Natal. UCedric Masondo weSASRIA uthi kukhona nabantu abagagamelayo ngokufaka izicelo zomgunyathi.